“အချစ်ရဲ့အခြားသော ခေါင်းစဉ်…..” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » “အချစ်ရဲ့အခြားသော ခေါင်းစဉ်…..”
“အချစ်ရဲ့အခြားသော ခေါင်းစဉ်…..”
Posted by lin naing on Oct 13, 2012 in Copy/Paste |2comments
ကျွန်တော် မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို ချစ်ခဲ ့တယ်……..
သူ ့ကို ကျွန်တော်တစ်နေ့မတွေ ့ရရင် မနေနိုင်လောက်အောင်ပဲ ချစ်ခဲ ့မိတယ် …………….
ဒါပေမဲ ့မတွေ ့ရတဲ့နေ ့ရက်တွေလဲရှိခဲ ့တာပေါ့…… အဲ ့ဒီအချိန်ဆို သူကျွန်တော့်ကို စိတ်ဆိုးတက်တယ်
နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော် သူ ့ရဲ ့အနားကနေ အဝေးကိုထွက်သွားခဲ ့တယ်……………ဘယ်တော့မှ ပြန်မသွားတော့ဘူးလို ့လဲ စိတ်ထဲကနေ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာချခဲ ့တယ်……………
တစ်နေ ့တော့ သူကျွန်တော့်ကို တွေ ့ခွင် ့တောင်ခဲ ့တယ်………………..ကျွန်တော်က သူတောင်းဆိုတာကို လိုက်ရောပေးနိုင်ဖို့ခွန်အားတွေ မရှိတော့ဘူး…………သေချာပါတယ် ကျွန်တော် သူ ့ကို
စွန် ့လွှတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ………..အဲ ့ဒါကြောင့်သူကို ကျွန်တော် ရှောင်နေခဲ ့တယ်…………….
တစ်နေ ့တော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျွန်တော် အလုပ်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာ တစ်ယောက်တည်းစောင် ့နေတာနဲ့ကြ ုံခဲ ့တယ်……………ကျွန်တော်ကိုတွေ ့တော့ သူက ကျွန်တော့်ကိုပြောတယ် သူနဲ ့ခဏလောက်လိုက်ခဲ ့ပေးပါလို့ကျွန်တော်ကို ခွင် ့တောင်းပြန်တယ်…………..ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ စိတ်ထဲမှာ အလိုလိုမွန်းကျပ်လာတယ် ………….ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် သူ ့နောက်ကိုလိုက်သွားခဲ ့တယ် …………………………… သူက လူရှင်းပြီး စကားအေးအေးဆေးဆေးပြောလို ့ရမဲ ့နေရာလေးကို ကျွန်တော်ကို ခေါ်သွားတယ်………………
သူခေါ်သွားတဲ့နေရာလေးကို ရောက်တော့ နာရီဝက်လောက် ကျွန်တော်ကို စကားမပြောပဲနဲ့ကျွန်တော့်ကျောခိုင်းပြီး အဝေးကို ကြည် ့နေခဲ ့တယ်…………..ကျွန်တော်က သူမရဲ့နောက်ကျောပြင်ကိုကြည့်ပြီး “အရမ်းချစ်တယ်”လို့ပြောလိုက်ချင်တာ ဒါပေမဲ ့ကျွန်တော်မပြောဖြစ်ခဲ ့ပါဘူး………………
နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ သူမကို ကျွန်တော်ကပဲစကားစပြောမယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော်က သူမရဲ့နာမည်လေးကို တိုးတိုးလေးခေါ်လိုက်တယ်……………အဲ ့ဒီတော့ ကျွန်တော်ဘက်ကို သူမရဲ ့မျက်နှာလေးလှည် ့လာတယ် …………………ပါးပြင်မှာ မျက်ရည်စီးကြောင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ကို ပြုံးပြတယ်……ပြီးတော့ ကျွန်တော်ကို သူမက ပြောတယ် ကျေးဇူးပြုပြီး သူမေးတာကိုဖြေပေးနိုင်မလားဆိုပြီး ကျွန်တော်ကိုမေးလာတယ်………………..ကျွန်တော်က သူ ့ရဲ ့အမေးကို ဖြေပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို ့ထင်ပြီး ခေါင်းညှိတ်ခဲ ့တယ်…………ပါပြင်နုနုလေးပေါ်ကို စီးကျနေတဲ ့မျက်ရည်တွေကို ကျွန်တော်သုတ်ပေးချင်နေမိတယ် ဒါပေမဲ ့ကျွန်တော် ရဲ ့လက်တွေတုန်နေတယ်…………..မျက်ရည်ကိုမသုတ်ပေးခဲ ့ပါဘူး…………..
သူမက ကျွန်တော်ကိုစမေးတယ် “အမုန်းခံရမှာကို အရမ်းကြောာက်တဲ ့“ကို”က ဘာာ့ကြောင် ့မုန်းအောင်လုပ်လိုက်တာလဲတဲ ့………..” ကျွန်တော်က မေးစရာ ကျန်သေးလားလို ့သူမကိုမေးလိုက်တယ်………..အဲ ့ဒီတော့ သူမက ကျန်သေးတယ်တဲ ့…………..ပြီးတော့ ဆက်မေးတယ် “ကို ့ရင်ထဲမှာ ချစ်တက်တဲ့နှလုံးသားကော ရှိရဲ ့လားတဲ ့……….”ကျွန်တော်ကို မေးလိုက်တာ ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲတော့ မသိဘူး……….ရင်ထဲမှာ စို ့နင် ့ကြေကွဲလာပြီး ကျွန်တော် မျက်ရည်ကျလာခဲ ့တယ်………………မျက်ရည်ကျလာတာကို သူမ မတွေ ့နိုင်ဘူးလေ ဘာဖြစ်လို ့လဲဆိုတော့ မိုးတွေက ရွာသွန်းနေလို ့ပေါ့…………………..ပြီးတော့ ဆက်မေးတယ် “အရမ်းချစ်တယ် ဝေးရမှာ အရမ်းကြောက်တယ်ဆိုပြီး ညီမရဲ ့ဘေးမှာ မနေဘဲ ဘာဖြစ်လို ့အဝေးကိုထွက်သွားတာလဲတဲ ့…………” သူမက မေးစရာမရှိတော့ဘူးဆိုပြီး ကျွန်တော်ဖြေမဲ့အဖြေက ဘယ်လိုအရာလဲ ဆိုတာကို ကျွန်တော့်ကို စိုက်ကြည် ့ပြီး စောင် ့နေခဲ ့တယ်…………………………………………………………………………………………..
ကျွန်တော်သူမေးတာတွေကို တစ်ခုမှ ပြန်မဖြေခဲ ့ဘူး…………..ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က မေးခွန်းတစ်ခုပဲပြန်မေးခဲ ့တယ် အဲ ့ဒါဘာလဲဆိုတော့……………“အချစ်ရဲ့အခြားသော ခေါင်းစဉ်တစ်ခု”ကို သိလားလို ့ပြန်မေးလိုက်တယ်………………သူမက နားမလည်နိုင်တဲ ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်မေးတဲ ့မေးခွန်းကိုချက်ချင်းပဲ ပြန်ဖြေပေးတယ်……………“မသိဘူးတဲ ့………” သူမက အဲ ့ဒီလိုဖြေတော့ ကျွန်တော်က ပြောလိုက်ပါတယ် “ ညီမ မေးတဲ့မေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေဟာ ကိုမေးတဲ့မေးခွန်းရဲ ့အဖြေကို ညီမသိတဲ ့အခါကြရင် ညီမ နားလည်လာမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြီး သူမကို ကျောခိုင်းပြီး ထွက်လာလိုက်ခဲ ့တယ်…………….အခုဆိုရင် တစ်နှစ်တောင်ပြည် ့ခဲ ့ပြီလေ…………ဒီနေ ့ဒီအချိန်အထိ သူကိုချစ်နေဆဲ ပါ……………………..
စာဖက်သူ မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ဒီဇာတ်လမ်းလေးဟာ ဖြစ်ရပ်မှန်မို့စာဖက်သူတို့စာဖက်ပြီးတဲ ့အဆုံးမှာ “အချစ်ရဲ ့အခြားသော ခေါင်စဉ်” ကို သိခဲ ့ရင် ဖြေဆိုပေးနိုင်ပါတယ်လို ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်…………ကျွန်တော်ကတော့ အဖြေကိုသိပါတယ်……………..
အသင့်တော်ဆုံးကတော့အချစ်ဆိုတာ အချစ် ပါဘဲ။